Qualcomm dia manambara Snapragon 820, 617 ary 430 Chip | Androidsis
Tamin'ity taona ity dia nanana fahasosorana tamin'ny mihoatra ny mari-pana tafahoatra amin'ny chip Snapdragon 810 izay naka vaovao be fampitandremana ny amin'ireo olana nomen'ity chip ity Ny zavatra manokana momba an'io olana io dia amin'izao fotoana izao, ny chips Qualcomm dia nitondra tena tamin'ny fomba tsara foana, hany ka noho ny hafanana be loatra an'io chip manokana io, andao lazaina fa "voavela heloka." Ireo izay tsy namela azy ireo dia i Samsung izay nanohy nametaka ny chip Exynos azy tao amin'ny Samsung Galaxy S6.
Androany ny orinasa dia nanambara andiana chips Anisan'izany ny Snapdragon 820, ny workhorse-ny mandritra ny volana ho avy ary manana ny fahaizan'ny hafainganam-pandeha LTE tafakatra hatramin'ny 600 Mbps ary 150 MBps mampakatra amin'ny alàlan'ny modem X12 LTE vaovao. Ity puce ity koa dia miavaka amin'ny teknolojia manokana izay manampy ny antenna ny telefaona amin'ny famolavolana metaly, izay hita fa hahena ny antso latsaka ary hitondra any amin'ny fihenan'ny herinaratra aza.
1 Snapdragon 820 ho an'ny LTE
2 Snapdragon 617, 430 ary Quick Charge 3.0
Snapdragon 820 ho an'ny LTE
Ny iray amin'ireo hatsarana kely ananan'ity puce ity dia ilay orinasa dia nanatsara ny fifandraisan'ny antso rehefa mifamadika Wi-Fi sy LTE. Qualcomm dia niresaka momba ny toetra tsara sy tombontsoa azo avy amin'ny LTE hafainganam-pandeha Snapdragon vaovao, izay ahafahan'ny mpampiasa miditra amin'ny horonan-tsary 4K Ultra HD, ny fitaratra mivantana eo amin'ny fahitalavitra anao na ny fijerin'ny entana rehetra ny sary nalaina tao hetsika iray.
Ny tombony amin'ny fiantsoana Wi-Fi Smart dia ny fikarakarana ny modem X12 LTE misafidy ho azy eo anelanelan'ny LTE sy Wi-Fi arakaraka ny kalitaon'ny famantarana sy ny fandrakofana izay misy amin'ireo fifandraisana roa ireo.
Snapdragon 617, 430 ary Quick Charge 3.0
Ny chips Snapdragon 617 sy Snapdragon 430 dia tonga miaraka aminy ny kendrena eo afovoany ary ny fiandohany dia manasongadina Cortex-A53 amin'ny fotodrafitrasa octa-core miaraka amin'ny hafainganana mahatratra 1.5 GHz ho an'ny 617 sy 1.2 GHz ho an'ny 430. Ny sary dia Adreno 505.
Ny zavatra hitantsika fa iraisana amin'ireo chips telo ireo dia izany izy rehetra dia manolotra fanampiana amin'ny fenitra Quick Charge 3.0 vaovao. Ity fenitra ity dia manitatra ny safidy amin'ny famoahana mety amin'ny 5V, 9V, 12V ary 20V ao amin'ny Quick Charge 2.0 ka hatramin'ny 3.6V ka hatramin'ny 20V amin'ny 200mV increment. Izany dia vokatry ny algorithm vaovao izay manampy amin'ny famaritana ny habetsaky ny angovo tokony hahatratra ny fitaovana tsirairay ao anatin'ny fotoana iray.
Izy io dia manana fanohanana ny fifanarahana mihemotra miaraka amin'ny haitao Quick Charge sy ireo mpampifandray USB Type-C. Manodidina ny fotoana fiampangana avy amin'ny zero hatramin'ny 80 isan-jato, izay amin'ny 90 minitra ny fitaovana sasany, miaraka amin'ny Quick Charge 3.0 dia afaka 35 minitra fotsiny. Izay inefatra haingana kokoa noho ny fomba famoahana mahazatra mahazatra, na indroa amin'ny Quick Charge mahazatra ary hatramin'ny 38 isan-jato raha oharina amin'ilay Quick Charge 2.0 teo aloha.
Sombiny sasany izay tsy ho ela hanomboka hahita ao amin'ireo fitaovana vaovao isika izay avy amin'ireo mpamokatra maro izay manana Android ho tanjon'izy ireo mandritra ny volana vitsivitsy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Qualcomm dia manambara ny chips Snapdragon 820, 617, 430 ary Quick Charge 3.0